१७ वर्षीया किशोरीको बयान- त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो ‘करणी’ गरे ! « गोर्खाली खबर डटकम
१७ वर्षीया किशोरीको बयान- त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो ‘करणी’ गरे !
विराटनगर : सा’मूहिक क’रणीमा परेकी एक किशोरी ग’र्भवती भएको घ’टना बाहिरिएको छ। मोरङको उर्लाबारीकी १७ वर्षीया किशोरीको पेटमा चार महिनाको ग”र्भ रहेको तथ्य खुलेको हो। उर्लाबारी नगरपालिका-५ का ३० वर्षीय प्रदीप खतिवडा र २१ वर्षीय भेषराज आचार्यले गत फागुन २७ गते किशोरीमाथि सा’मूहिक क’रणी गरेका मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताए।
करणीबाट किशोरीको ‘गर्भ’ बसेको उनले जानकारी दिए। चकलेटमा खराब कुरा मि’साएर खुवाउँदै अ’र्धबे’होस बनाएर खतिवडा र आचार्यले किशोरीमाथि पा’लैपालो क’रणी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
‘चकलेटमा नराम्रो दवाई मि’साएर खान दिएपछि अ’र्धचेत भएकी बालिकालाई कर’णी
घरमा कोही पनि नभएको र दिउँसो घरमा एक्लै बसिरहेका बेला किशोरी सा’मूहिक क’रणीको सि’कार भएको राईले बताए। ‘घरका अभिभावक काममा गएको बेला दुई युवा पुगेछन्’, उनले भने, ‘चकलेटमा नराम्रो दवाई मि’साएर खान दिएपछि अ’र्धचेत भएकी बालिकालाई कर’णी गरेको पाइयो।’
खतिवडा र आचार्यले यस विषयमा कसैलाई पनि नभन्न र भनेमा सकिदिने ध’म्की दिएका थिए। त्यही ड’र र त्रा’सका कारण किशोरीले घटनाबारे कसैलाई बताइनन्। महिनावारी रोकिएको लामो समय भएपछि पीडित आमाले सोधीखोजी गर्न थालेपछि घटना बाहिर आएको हो। कर’णीमा संलग्न दुवै जनाविरुद्ध पी’डित किशोरीका अभिभावकले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा गत सोमबार किटानी जाहेरी दिएका छन्। जाहेरीका आधारमा खतिवडा र आचार्यलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा करणीको तथ्य खुलेको उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक सुवास राईले बताए।
उनका अनुसार ‘घटनामा संलग्न युवाहरु पहिले पनि पी’डित बालिकाको घरमा आउजाउ गर्ने गरेको पाइयो’, राईले भने, ‘तर फागुन २७ गते घरमा कोही पनि नभएको अवस्थामा पुगेर बालिकामाथि कर’णी गरेर हिँडेछन्।’ कोसी अस्पताल विराटनगरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा किशोरी गर्भवती रहेको पुष्टि भएको हो।
यो पनि – विवाहपछिको जीवन खुसी र मजबुत कसरी बनाउने ?
विवाहपश्चात् पुरुष र महिलाले एक–अर्काको स्वामित्व ग्रहण गर्दै जीवनभर सँगै रहनुपर्छ । पूर्वीय सभ्यतामा विवाह भनेको यस्तो चिज हो कि जो एकपटक गरिसकेपछि जीवनभर सँगै रहनुपर्छ । वैवाहिक जीवनमा असमझदारी आएमा जीवन नै खल्लो हुने गर्छ ।
विवाहपछि विभिन्न सम’स्या आउन सक्छन् । त्यस्ता समस्यालाई सुल्झाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन । यस्तो अवस्थामा एक–अर्काको सल्लाहमा समाधानको खोजी गर्न आवश्यक हुन्छ ।
आफ्नो पार्टनरलाई कहिल्यै पनि दु र्व्यवहार गर्नु हुँदैन । एक्लै हुँदा गल्तीको महसुस गराउने गतिविधि गर्दा सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन सक्छ । बाहिरी साथीको आवश्यकतामा घरबाहिर बस्ने, काममा मात्र केन्द्रित हुनेजस्ता गतिविधिलाई नियमितता दिनुहुँदैन । यस्तो गतिविधिले एक–अर्काप्रति असमझदारी उत्पन्न गर्न सक्छ ।
कम्तीमा वर्षको २–४ पटक जीवनसाथीसँग केही दिनका लागि घुम्न निस्कनु राम्रो हुन्छ । यसरी घुम्न निस्कँदा एक त जीवनमा यादगार क्षण थपिँदै जान्छन्, अर्को एक–अर्काबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जान्छ ।
यसो गर्दा जीवनसाथीले खुलेर मनको कुरा व्यक्त गर्ने मौका पनि पाउँछन् । शारी रिक सुखले मात्र सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदैन । त्यसैले शारी रिक सम्ब’न्धमा भावना पनि जोडिन आवश्यक हुन्छ ।
कट्रीना र विक्कीले गरे बिवाह !
म देश कै ‘बा’ हुँ, नेपाली इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको काम मैले ३ बर्षमा गरेको छु : केपि ओली